Akuwona Wonke Umuntu Oxhumana Nawe Oyikhasimende | Martech Zone
Ukuxhumana okuku-inthanethi nokuvakashelwa okuyingqayizivele kuwebhusayithi yakho akuwona amakhasimende ebhizinisi lakho, noma ngisho namakhasimende angaba khona. Izinkampani zivame ukwenza iphutha lokucabanga ukuthi konke ukuvakashela iwebhusayithi kungumuntu onentshisekelo kumikhiqizo yakhe, noma ukuthi wonke umuntu olanda iphepha elilodwa elimhlophe ulungele ukuthenga.
Akunjalo. Akunjalo neze.
Isivakashi sewebhu singaba nezizathu eziningi ezahlukahlukene zokusebenzisa isiza sakho nokuchitha isikhathi nokuqukethwe kwakho, akukho nokusho ukuba ikhasimende langempela. Isibonelo, izivakashi zesiza sakho zingaba:
Izimbangi zigade wena.
Abafundi bacwaninga iphepha lesikhathi sekolishi.
Futhi nokho, cishe wonke umuntu owela kulezi zigaba ezintathu uvame ukuba sengozini yokuthola ucingo noma ukuvalwa ohlwini lwe-imeyili.
Ukufaka zonke izivakashi ebhakedeni lamakhasimende kuwumkhuba oyingozi. Akukona ukukhipha kuphela izinsizakusebenza ukulandela umuntu ngamunye owabelana nenombolo yakhe yocingo noma ikheli le-imeyili, kepha futhi kungadala ulwazi olubi kubantu abebengenazo izinhloso zokuba yizisulu zenqwaba yezinto zokumaketha.
Ukuguqula izivakashi kumakhasimende, noma ukwazi nje ukuthi iziphi izivakashi ezikulungele ukuguqulwa, kudinga ukuqonda okujule kakhulu ukuthi zingobani. Yilapho lapho Ukushaya amagoli kwe-3D (ntathu) iqala ukudlala.
Ukuhola amagoli akuqali, kepha ukuphakama kweBig Data ingenise isizukulwane esisha sezixazululo zokuhola ze-3D ezifaka ukujula ekutheni abathengisi nabathengisi babheka kanjani amakhasimende namathemba. Ukufakwa kwamagoli kwe-3D kungukuvela kwemvelo kwedatha eyigugu obukade uyiqoqa kumakhasimende akho iminyaka, futhi ukuwasebenzisela ukusebenzela kangcono lawa makhasimende futhi ekugcineni, ukwandise ukuthengisa kwakho nomugqa wakho ophansi.
Noma ngabe ibhizinisi ligxile kumasu wokumaketha we-B2C noma we-B2B, ukuthola amagoli okuhola kwe-3D kungabasiza ukuthi balinganise ukuthi ithemba noma ikhasimende lifana kangakanani nephrofayili yabo "ekahle", konke lokhu ngenkathi kulandelwa izinga labo lokuzibandakanya nokuzibophezela. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ukugxila kwakho kubantu abangathenga ngempela, kunokuphonsa inetha elibanzi futhi elibizayo - ukufinyelela kuzo zonke izivakashi ezisanda kufika kusayithi lakho.
Okokuqala, Khomba ukubalwa kwabantu noma i-firmagraphics
Uzokwakha ukushaya kwakho i-3D ngokukhomba ikhasimende lakho. Uzofuna ukwazi ukuthi “Ngubani lo muntu? Ingabe bayifanele inkampani yami? ” Uhlobo lwebhizinisi okulo luzocacisa ukuthi iyiphi iphrofayili ozoyisebenzisa ukuthola amaphuzu e-3D kumakhasimende akho.
Izinhlangano ze-B2C kufanele zigxile kwimininingwane yabantu, njengobudala babo, ubulili, imali engenayo, umsebenzi, isimo somshado, inani lezingane, imidwebo eyisikwele yendlu yabo, i-zip code, okubhaliselwe kokufunda, ubulungu benhlangano nobulungu, njalonjalo.
Izinhlangano ze-B2B kufanele zigxile ku-firmagraphicdata, okubandakanya imali engenayo yenkampani, iminyaka ebhizinisini, inani labasebenzi, ukusondela kwezinye izakhiwo, i-zip code, isimo sabantu abambalwa, inani lezikhungo zesevisi nezinto ezinjalo.
Ucezu lwesibili lokuthola amagoli kwe-3D ukuzibandakanya
Ngamanye amagama, uzofuna ukwazi ukuthi leli khasimende lihlanganyela kanjani nomkhiqizo wakho? Ngabe bakubona kuphela emibonisweni yezohwebo? Ingabe bakhuluma nawe ngocingo njalo? Ingabe bayakulandela ku-Twitter, ku-Facebook naku-Instragram futhi bangena ku-FourSquare lapho bevakashela indawo yakho? Ingabe bajoyina ama-webinars akho? Ukuthi basebenzisana kanjani nawe kungabuthinta ubudlelwane babo nawe. Ukuxhumana okwengeziwe komuntu uqobo kusho ubuhlobo obuningi bomuntu siqu.
Okwesithathu, thola ukuthi ikhasimende lakho likuphi ebudlelwaneni babo nawe
Uma ungakabi khona, udinga ukuhlukanisa i-database yakho ngokuya ngobude besikhathi lapho ikhasimende lakho libe yikhasimende lakho. Ingabe leli yikhasimende impilo yakho yonke elithenge yonke imikhiqizo onayo? Ingabe leli yikhasimende elisha elingazi yonke iminikelo yenkampani yakho? Njengoba ungacabanga, uhlobo lwe-imeyili olithumela kumakhasimende wempilo yakho lonke lwehluke kakhulu kulelo olithumela kothile ekuqaleni kobudlelwano bakhe nawe.
Ngenkathi abathengisi abaningi behlukanisa imininingwane yabo ngokwezibalo zabantu noma ngama-firmagraphics kuphela, kufanele babe njalo ukuzwela esigabeni sekhasimende emjikelezweni wempilo futhi uncike kakhulu ekushayeni kwe-3D. Ikhasimende elisha elike lathumela i-imeyili kuphela ngeke libe namandla njengekhasimende lesikhathi eside elivakashele ihhovisi lakho. Ngokufanayo, umuntu ohlangane naye embukisweni wezohwebo kungenzeka abe yikhasimende elibuthakathaka kunalowo othenge kuwe buthule iminyaka emihlanu. Ngeke ukwazi lokho ngaphandle kokushaya kwe-3D.
Nikeza zonke isivakashi ukwelashwa ngegilavu ​​elimhlophe.
Phakathi kwayo yonke le nkulumo yokusebenzisa amagoli okuhola we-3D ukugxila kuzivakashi ezinamandla okuthenga, ngingahle ngiphumelele uma ngingashongo ukuthi konke ukuxhumana nesivakashi kufanele kube ukwelashwa okwenziwe ngamagilavu ​​amhlophe - okulalelayo, okunobungane nesisombululo -kushayelwa isivakashi. Khumbula, akukhona ukwenza imali eningi kulokho kuthengiswa kokuqala. Imayelana nokunikeza lokho isivakashi esikudinga ngempela, okuzoholela ekuhlangenwe nakho okuhle kwamakhasimende nasekuthengiseni okuzayo. Nweba lokhu kuzwela kuzo zonke izivakashi, ngisho nabancintisana nabo, abafuna umsebenzi, kanye nabafundi basekolishi. Ngeke wazi ukuthi umusa omncane uzokhokha nini izinzuzo kamuva.
Awukwazi ukumane uthole amakhasimende alingana kahle kakhulu. Kufanele uzihlakulele. Kanjani? Ngokubenza bakwazi ukuhamba ngokukhululekile esigabeni ngasinye se-lifecycle, ukuthola okuqukethwe okulungile noma ukuxhumana abakufunayo endleleni. Lawa angamandla esixazululo se-Right On Interactive's Lifecycle Marketing: ukunika amandla izinhlangano ukuthi zazi kahle ukuthi ikusasa noma ikhasimende likuphi ebudlelwaneni balo nomkhiqizo — kusuka kulokho okulindelwe kuye kumlandeli omkhulu — nokuthi ungasondela kanjani kubo ukukhulisa inani lesikhathi sokuphila.
Ukudalula: Ngakwesokudla ku-Interactive uyiklayenti lethu futhi ungumxhasi we Martech Zone. Funda kabanzi ngesixazululo sabo sokumaketha impilo namuhla:
Funda kabanzi mayelana ne-Right On Interactive
Tags: 3d amagolib2bb2cAbancintiswanoCustomerumjikelezo wempilo wamakhasimendeukumaketha kwempilo yamakhasimendeukubalwa kwabantuifemui-firmographicsabafundi abafuna umsebenziukuhola amagoliisivakashi esiku-inthanethingqo ekuhlanganyeleniizivakashiizivakashi zewebhu
UTroy Burk, CEO kanye noMsunguli we Ngakwesokudla ku-Interactive, ungumholi wokucabanga owaziwayo kanye nesipikha ezihlokweni zokumaketha kwe-lifecycle, ukumaketha okuzenzakalelayo, ukuhola amagoli nokukhulisa, nokumaketha nge-imeyili. UTroy uthole iziqu zakhe zeBachelor eBall State University. Uhlala e-Indianapolis nonkosikazi wakhe nezingane zakhe ezintathu lapho akhonza khona kwiKomiti Elibhekele Ubulungu leGreater Indianapolis Chamber of Commerce futhi uzibandakanya nemidlalo yentsha.
Izinhlelo Zokusebenza Ezimbili Ze-Twitter Zokulawula Abalandeli